INKXASO-Beijing Convista Flow Control Equipment Co., Ltd.
I-CONVISTA ayiboneleli kuphela ngengcebiso yobuchwephesha kwisisombululo solawulo lokuhamba kwinqanaba lokuqala, kwaye ikwasebenza namaxwebhu obuchwephesha kuyo yonke iprojekthi.
Kwaye emva kwenkonzo, iqela leenkonzo zobunjineli be-CONVISTA linokunika impendulo ngexesha elifanelekileyo kwiimfuno zabathengi kwihlabathi liphela: ubungqina kunye nenkxaso yezobuchwephesha ekugunyaziseni nasekuqaliseni inqanaba, ulondolozo luvale ulongamelo, ukusombulula iingxaki kunye nenkonzo yokulungisa, ukhetho lwezixhobo, ulondolozo kunye noqeqesho lokusebenza.
Izisombululo kufuneka zibonelelwe
Eyona njongo iphambili ye-CONVISTA kukubonelela ngezisombululo zolawulo lokuhamba okunokwenzeka kumashishini ahlukeneyo ngokuchasene neemfuno zeeprojekthi ezahlukeneyo.
Inyathelo1: Iqela lethu lobunjineli liya kuthi, kwindawo yokuqala, lihlalutye ngokucokisekileyo iimeko zeprojekthi, iinkcukacha zobuchwephesha nokunye okunjalo, ngaloo ndlela kwenziwe uvavanyo olufanelekileyo;
Inyathelo 2: Isebe lethu lezorhwebo liya kuvavanya iimfuno ezizodwa & zorhwebo zabathengi kwaye liphendule ngokufanelekileyo kumphathi oyintloko wentengiso;
Inyathelo3: Ngokusekwe kwidatha engentla, iinjineli zethu ziya kukhetha uhlobo oluchanekileyo, izinto ezifanelekileyo, iivelufa zomsebenzi wasekunene kunye nee-actuator ezifikelela kwiimfuno zeeprojekthi, kananjalo, ukulungiselela abathengi, ukonga iindleko kuya kuba yenye yeembono zabo.
Inyathelo4: Iqela lezorhwebo liza kusombulula esona sisombululo siphezulu, thumela iKoteyishini yobuGcisa kunye neNtelekelelo yeNtengiso kubathengi ngee-imeyile.
2．Umgangatho woQinisekiso kunye noLawulo loMgangatho
Zonke iifektri ezigunyaziswe yiCONVISTA akufuneki zibambe zonke iimvume eziphambili, kubandakanya i-ISO9001, i-API 6D, i-API 6A, i-CE / i-PED, i-HSE, i-API 607 ​​/ i-API 6Fa isiqinisekiso esikhuselekileyo somlilo,
kodwa kwakhona, kufuneka ube nenkqubo yolawulo egqityiweyo ukusuka kwimathiriyeli eluhlaza ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo. Abasebenzi kunye neZiko lokuPhatha uMgangatho wangaphakathi kumzi-mveliso kufuneka ukuba bakulungele kakhulu ukwenza uvavanyo lweRadio graphic, uvavanyo lwe-Ultra-sonic, Idayi yokungena, iMagnetic Particles, Isazisi seZinto eziPhezulu (PMI), uvavanyo lweMpembelelo, uvavanyo lokuqina, uvavanyo lokuqina, uvavanyo lomlilo olukhuselekileyo. , Uvavanyo lweCryogenic, uvavanyo lwe-Vacuum, uvavanyo oluncinci lokubaleka, uvavanyo lwegesi ephezulu, uvavanyo oluphezulu lobushushu kunye novavanyo lwe-Hydro-static.
3．Uphando, uPhuhliso kunye noBuchule
I-CONVISTA inobungcali obubanzi kuyilo lwevalvu, kunye neenkqubo zeCAD / CAM ezihlanganisiweyo (imisebenzi eQinisekileyo) ukuwaxhaphaza ngokupheleleyo amathuba ezisombululo zobunjineli ezintsha kunye nokhuphiswano ngelixa kuqinisekiswa ukuthobela yonke imigangatho efanelekileyo.
I-CONVISTA ibibalasele ngokukodwa ekuphuhliseni uyilo olutsha lwezivalo ezinkulu zoxinzelelo oluphezulu kunye nenkonzo yeqondo lobushushu, iivalvu zeCryogenic umhlwa wezivalo ezinganyangekiyo kunye neemveliso eziyilwe ngokukodwa ziinkonzo ezithile.